မကောင်းဆိုးဝါး ဆိုတာတကယ်ရှိသလား ? / Does the Evil Exit ? ﻿
မကောင်းဆိုးဝါး ဆိုတာတကယ်ရှိသလား ? / Does the Evil Exit ?
Tags: မကောင်းဆိုးဝါး ဆိုတာတကယ်ရှိသလား ? / Does the Evil Exit ?
တစ်ရက်မှာ တက္ကသိုလ်ဆရာတစ်ယောက်က သူ့တပည့်တွေကို စိန်ခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
တပည့်တွေက ရဲရင့်စွာနဲ့ပြန်ဖြေတယ် " ဟုတ်တယ် "
Yes, "everything" was the answer of the student.
"ဟုတ်တယ်" " အားလုံး " လို့ကျောင်းသားအားလုံးကပြန်ဖြေတယ်။
In this case, God also created evil, correct? Because evil exists, said the teacher.
" ဒီကိစ္စမှာ ဘုရားသခင်က မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုလည်း ဖန်တီးတာပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေက တည်ရှိနေတယ်လေ။ ဟုတ်တယ်မှတ်လား။ " ဆရာကပြောတယ်။
အဲဒါကို ကျောင်းသားတွေက ပြန်မဖြေနိုင်ကြပဲ ငြိမ်သက်နေကြတယ်။
The teacher was delighted at the opportunity to prove one more time that faith was onlyamyth.
ဆရာက ဒီအခွင့်အရေးကို ကျေနပ်စွာနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီးအတည်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ယုံကြည်မှု့သဒ္ဒါတရားဆိုတာ ဒဏ္ဏာရီတစ်ခုပါပဲလို့ ထပ်ပြောတယ်။
Suddenly, another student raised his hand and asked, "May I ask youaquestion, professor?"
ရုတ်တရက် ကျောင်းသားတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့လက်ကို ဝှေ့ယမ်းပြီးတော့ " မေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးပါရစေ၊ ဆရာ "
" မေးပါ။ "
" အအေးဆိုတာတည်ရှိပါသလား "
Of course, answer the professor, Did you never feel cold?
" တည်ရှိတာပေါ့။ မင်းအေးတာကို မခံစားဖူးဘူးလား "
Actually, sir, cold does not exist. According to studies in Physics, cold is the total and complete absence of heat.
" တကယ်တမ်းတော့ အအေးဆိုတာမတည်ရှိပါဘူး။ ရူပဗေဒ သဘောတရားအရ အအေးဆိုတာ အပူလုံးဝ မရှိခြင်းပါ "
An object can only be studied if it has and transmits energy and it is the heat of and object that transmits it's energy.
" အရာဝတ္ထုတွေက စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မှု့ကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ။ အအေးဆိုတာ အပူရဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မှု့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ "
"Without heat, the objects are inert, incapable to react. But cold does not exist. We created the term 'cold' to explain the lack of heat."
" အပူမရှိရင် အရာဝတ္ထုတွေဟာ ဓာတ်မပြုနိုင်ဘူး၊ တုန့်ပြန်မှု့စွမ်းရည်မရှိနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အအေးဆိုတာမတည်ရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေက အပူကင်းမဲ့မှု့ကို ဖော်ပြချင်တဲ့အတွက် အအေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ "
"And darkness?", continued the student.
" နောက်ပြီးတော့ အမှောင်ဆိုတာ " ကျောင်းသားက ဆက်ပြီးပြောတယ်
"It exists." reply the professor.
" အဲဒါတည်ရှိတယ် " ဆရာက ပြန်ပြောတယ်။
Again, you're wrong sir, darkness is the total absence of light.
" ဆရာ ထပ်မှားပြန်ပြီ၊ အမှောင်ဆိုတာ အလင်းလုံးဝမရှိတော့ခြင်းပါပဲ "
You can study light and brightness, but not darkness.
" ကျွန်တော်တို့တွေက အလင်းနဲ့ တောက်ပခြင်းကို သင်ယူလေ့လာလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှောင်ကိုတော့ လေ့လာလို့မရပါဘူး "
The prism of Nichos shows the variety of different colors in which the light can be decomposed according to the longitude of the wave.
့ လှိုင်းအလျားအတို အရှည် တွေပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ အရောင်တွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကို သက်တံဖြာစေတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပြီးတော့ ရှင်းပြခဲ့တယ်။
"Darkness is the term we created to explain the total absence of light."
" အမှောင်ဆိုတာလည်း အလင်းလုံးဝမရှိတော့ခြင်းကိုဖော်ပြလိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ "
And finally, the student asked: "And evil,sir, does evil exist?"
နောက်ဆုံးတော့ ကျောင်းသားကမေးတယ် " မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာ တည်ရှိပါသလား "
God did not create evil, 'Evil' is the absence of God in people's heart, it is the absence of love, humanity and faith.
" ဘုရားသခင်က မကောင်းဆိုးဝါးကို မဖန်တီးခဲ့ပါဘူး။ မကောင်းဆိုးဝါး ဆိုတာ လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားသခင်လုံးဝမရှိတော့တာ၊ ချစ်ခင်ခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ ယုံကြည်မှု့သဒ္ဒါတရားစတာတွေ လုံးဝမရှိတော့တာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ "
Love and faith are like heat and light. They exist.
ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့ ယုံကြည်မှု့သဒ္ဒါတရားဆိုတာ အပူနဲ့ အလင်းလိုပါပဲ။ သူတို့တည်ရှိတယ်။
"Their absence lead to evil."
Now it was the professor's turn to remain silence.
The name of the student was